तपाईको लागि यो साता कति शुभ, कति अशुभ ? हेर्नुहोस् « Postpati – News For All
तपाईको लागि यो साता कति शुभ, कति अशुभ ? हेर्नुहोस्
असार ६, काठमाडौं | असार ६ गते (आज) देखि १२ गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस् |
यो साता दौडधूप गर्नु परेपनि लाभ नै हुनेछ । परोपकार तथा सहयोग आदिमा पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ । सामाजिक सेवा गर्ने अवसरले मान–प्रतिष्ठा बढाउनेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्राको योगछ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,७ र शुभरङ्ग हरियो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
६ असार २०७७, शनिबार को दिन प्रकाशित